पागल हुन् भिम उपाध्याय, त्यहि भएर यस्ताे काम गर्दैछन् - Supa Online
२०७७ कार्तिक १६, आईतवार १२:४९
भिम उपाध्याय । नाम धेरैले सुन्नु भएकाे छ हाेला । सुन्नु भएकाे छैन भने सुन्नु हाेला । नेपाल सरकारकाे उच्च पदमा रहि राष्ट्रका लागि सेवा गर्दै अहिले निभरण (रिटाईर) जीवन विताई रहेका व्यक्ति हुन् उपाध्याय । ईन्जिनेरिङ्ग पढेका उपाध्याय पछिल्लाे समय सामाजिक संजालमा भाईरल छन् । उनलाई नचिन्ने मानिस कमै हाेलान् ।
कुनै राजनितिक दल समूह संगठन संस्थामा आबध्द नरहिकनै उपाध्याय एक्लै समाज सुधार आन्दाेलनमा छन् । एकल आन्दाेलनकारी हुन् भन्दा फरक नपर्ला । अहिले नेपालकाे परिभेषकाे कुरा गर्ने हाे भने अब्बल सावित भएका व्यक्तिहरु राजनितिमा गए पछि पतनकाे बाटाे तिर गएकाे थूप्रै उदाहरण हेर्न सुन्न देख्न सकिन्छ भने त्यसकाे ठिक विपरित कुनै प्रतिष्ठा नवाेकेकाे सामान्य व्यक्ति राजनितिमा पुगेपछि अब्बल सावित भएका छन् । सामाजिक अभियन्ताहरुकाे कुरा गर्ने हाे भने पनि समुहगत रुपमा अभियान चलाउने धेरै अभियन्ताहरु छन् । तर भिम उपाध्याय एउटा त्यस्ताे नाम हाे जसले सरकार विरुध्द एकल आन्दाेलन गरिरहेका छन् ।
उपाध्याय न सड्कमा आउन्छन्, न सभा सम्मेलन गाेष्टी सेमिनारकाे आयाेजना नै गर्छन् । न आफ्नाे आन्दाेलनलाई समर्थन गरिदेउ, सहयाेग गर भन्दै हिड्छन् । तर पनि उनकाे आन्दाेलन र उनकाे अभियान यति सार्थक बनेकाे छ कि राज्य साेच्न बाध्य हुन्छ ।
उपाध्याय फेसबुक चलाउन्छन् एउटा फाेटाे पाेष्ट गर्छन् र पाेष्ट गरिएकाे फाेटाे के हाे भन्ने बारेमा दुई तीन लाईन क्याप्सन लेख्छन् । उनले गरेकाे पाेष्ट सत्य तथ्य हुनुका साथै राज्य तथा राज्यका संचालकहरु साेच्न बाध्य बनाउन्छ । उनले गरेकाे हरेक पाेष्ट मिनेट नहुदै सयाैकाे संख्यामा सेयर हुन्छ, लाईक कमेन्टकाे बर्षाद हुन्छ । उनले गरेकाे हरेक पाेष्ट सम्वन्धीत सराेकारवाला सम्म सामाजिक संजाल मार्फत नै पुग्ने गर्दछ र सम्वन्धी निकाय आफू सुध्रिन वा आफुले गरेकाे कामकाे जवाफ दिन बाध्य हुन्छ ।
भिम उपाध्यायकाे एउटा पाेष्टका कारण भईरहेकाे भष्ट्राचार राेकिएकाे छ, हुन लागेकाे भष्ट्राचारमा साेच परिवर्तन भएकाे छ, भई सकेका भष्ट्राचारकाे मुद्दा अख्तियार सम्म पुगेका छन् कतिपय मुद्दाहरुमा सुनुवाई समेत भई अपराधीलाई कानुनी कार्वाहि समेत भएकाे छ । उपाध्यायकाे एउटा पाेष्टमा यति शक्तिशाली देखिन्छ कि कुनै अनियमितता वा भष्ट्राचार भएकाे सूचना वा फाेटाे पाेष्ट भएकाे २४ घण्टा वित्न नपाउदै सराेकारबाले स्पष्टीकरण दिन्छन् ।
कुनै स्थानिय तहमा बसाेवास गर्ने सम्वन्धि जनताले पटक पटक गएर प्राप्त गर्न नसकेकाे सुचना वा उनीहरुले उठाउने गरेका मुद्दा महिनाै सम्म सम्वाेधन हुदैन तर उपाध्यायकाे एउटा पाेष्टले सराेकारवालाहरुलाई बाेल्न बाध्य बनाउन्छ त्यसैले उपाध्याय बहुला हुन् ।
किन हुन् बहुला उपाध्याय ?
भिम उपाध्याय अन्याय, अत्याचार, भष्ट्राचार, अनियमितताका बारेमा आवाज उठाउन्छन् त्यसैले उनी बाैलाह हुन् । एउटा समूह वा भाैतिक रुपमा भएकाे आन्दाेलनले परिणाम दिन नसके पनि उपाध्यायकाे एउटै पाेष्टले परिणाम तिर अघि बढाउन्छ अर्थात् समूह वा भिड भन्दा तागत उनकाे एउटा पाेष्टमा देखिन्छ त्यसैले उनी बाैलाह हुन् । भिम उपाध्यायकाे समूह छैन, दल छैन, एक्लै बेथेतिका विरुध्दमा लडि रहेका छन् त्यसैले उनी बाैलाह हुन् । सबै भन्दा ठुलाे कुराे उनका एक पाेष्टका कारण कयाै गरिव दुखिहरुका उध्दार भएकाे छ, घर टहरा बनेकाे छ, ओषधी उपचार सम्भव भएकाे छ त्यसैले उनी बाैलाह हुन् । स्वार्स्थ विना मानिसले केही गर्दैन । अझ अर्थ अर्थात रुपैया पैसा धन सम्पत्तिका लागि मानिसहरु अभियानमा जुटेकाे समेत देखिन्छ तर भिम उपाध्यायकाे तयश तर्फ पनि ध्यान गएकाे देखिदैन त्यसैले उनी बाैलाह हुन् ।
के छ अभियान उपाध्यायकाे ?
भिम उपाध्यायकाे कुन‌ै अभियान छैन, कुनै समुह छैन, कुनै दल छैन तर पनि ४ दिन यता उनी बैज्ञानीक महाविर पुनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयाेग गर्नमा जुटेका छन् । महाविर पुन, नेपालका बैज्ञानीक । विज्ञानका धेरै आविष्कार गरेका व्यक्ति । जसले अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत ख्याती प्राप्त गरेका छन् । विदेशि भुमिबाट राम्राे जागिर , अथाह पैसाकाे लाेभ देखाउदा समेत आफ्नै भुमिमा केही गर्छु भनी महान अभियानमा जुटेका व्यक्ति । जसले आफै घाेषणा गरि सहयाेग समेत मागेका छैनन् । तर आफ्नै डिग्री, सटिफिकेट, मेडलहरु विक्रिमा राखेका सरकारलाई समेत लज्जावाेध गराए । ब‌ैकले ऋण नपत्ताए पछि सामाजिक संजाल मार्फत ऋण आब्हान समेत गरेका थिए पुनले । अहिले उनै महाविर पुनकाे महा अभियानलाई सहयाेग गर्न भनी उपाध्यायले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयाेग गर्न अपिल गरेका छन् । उपाध्यायले सहयाेगका लागि आब्हान गरेकाे ४ दिन मात्र भएकाे छ तर उनकाे एक पाेष्टले ५ लाख भन्दा बढी रकम संकलन गरेकाे छ । धेरैले सहयाेग गर्ने आश्वास दिदै आएकाे समेत उपाध्यायले फेसबुक मार्फत बताउदै आएका छन् । जति मानिसले सहयाेग गरे सबैकाे नाम र फाेटाे उनले आफ्नै फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
यस्ताे थियाे उपाध्यायकाे पाेष्ट
“कल्पना नै गर्न नसक्ने गरी हिजोदेखि म चकित हुन पुगेको छु। अस्ति बेलुका मैले महाविर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सपोर्ट गर्न अपिल गरेदेखि हिजो र आज दिनभरि ठूलो सानो सहयोग दिने सयौँ जनाको ओईरो लागिरहेको छ। सहयोग दिन चाहनेहरूसंग मेसेन्जर र भ्वाइस कलमा संवाद गर्नबाट अहिले फुर्सद पाउन नसक्ने अवस्थामा म पुगेको छु।
हुन त महाबीर जीको नाम धनसुनेको कमै होलान् छन् तर पनि आविष्कार केन्द्रले गर्ने काम के रहेछ? कसरी केन्द्रलाई सहयोग गर्न सकिन्छ? त्यसबारेको प्रकृयाको जानकार भने धेरैलाई नभएको मैले पाएँ। महाबीर जी आफैले कसैसंग कहिल्यै दान चन्दा माग्दैनन्। त्यसैले अरू कसैले आविष्कार केन्द्रलाई आफ्नो सन्तान वा संस्था मानेर सहयोग जुटाउनु प्रत्येक नेपालीको धर्म बन्छ। आविष्कार केन्द्र जन्मेको एक वर्ष मात्र भएको छ, यो बामे सर्दैछ। देश विदेशमा यसको चर्चा निरन्तर बढे पनि यति चॉडै नै बेस्करी उपलब्धी हुने कुरा भएन।
सहयोगको राशी थोरै होस् वा धेरै, त्यो भन्दा पनि यो संस्थाप्रतिको अपनत्वपन र माया प्रमूख हो। यो हामी नेपाली ३ करोडको संस्था हो भनेर आफ्नै सन्तान ठानेर अहिले हुर्काउन जरूरी छ। पैसाबाहेक सहयोग गर्ने धेरै बाटा छन्।
यो संस्थाबाट आग्रह गर्ने बेला अझै भइसकेको छैन, यो पालनपोषणको अवस्थामै छ। २,४ वर्ष पछि यसले फल दिन थाल्नेछ। नेपाली युवाहरूको देश समृद्ध बनाउने र आफू पनि धनि बन्ने सूत्र फेला पार्ने छन्।
अहिले सपोर्ट गरौँ, बढी भन्दा बढी युवाहरूलाई ईनोभेशनमा रूचि बढाउने काम केन्द्रको हो। केन्द्रले कुनै फाईदा लिने सोचेको होईन, छैन। सबैले केन्द्रबाट लाभ लिन सक्ने गरी अहिले केन्द्रलाई सक्षम र बलियो बनाउदै जानुपर्छ। देशभरि नै यस्ता केन्द्रहरू स्वस्फूर्त ढंगमा खुलुन्। अरू गरेनन् वा गर्लान् वा गर्नुपर्छ वा किन गरेन भनेर हैन कि, मैले चैँ के गरेँ? त्यसमा चिन्तन गर्न अहिले खॉचो छ। अघि बढ्दै गर्दा अरूहरूले पनि सहयोगको हात बढाउने नै छन्। यही हो ईनोभेशनको ग्राउण्ड रूल!
मै अकेला चलता गया, कारवॉ बढते गया!”
उपाध्यायकाे फेसबुकमा डेढ लाख भन्दा बढी फलाेरहरु छन् । फेसबुकमा करिब ५ हजार साथी छन् । तिनै साथी र फलाेरहरुले उपाध्यायकाे पाेष्टलाई भाईरल गर्न सहयाेग पुराउने गरेका छन् । उपाध्यायले अहिले सम्म आफ्नाे पाेष्टलाई सेयर लाईक कमेन्ट गर्न कस‌लाई आग्रह गरेकाे पाईदैन तर उनले गरेकाे पाेष्टमा नखेली उनका फाेलरलाई चित्त नै बुझ्दैन । उनले गरेकाे पाेष्ट उपाध्याय आफैले सेयर नगरिदिनु हाेला भनी लेखे पनि उनका साथिहरु सेयर नगरि बस्न सक्दैन । गाँजा व्यवस्थीत गर्नु पर्छ व्यवसायीक खेती गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेका उपाध्यायकाे आफुले गाँजा सेवान नगरेकाे दावी गर्दै आएकाे भए पनि भिम उपाध्यायका फ्यानहरुलाई उनकाे नसा गाँजा भन्दा बढी लागेकाे देखिन्छ । सामाजिक सुधारका लागि काम गर्नु पर्छ, नीति र विधिमा चल्नु पर्छ भन्ने भिम उपाध्याय त्यसैले पागल नै हुन् ।
सम्बन्धीत समाचारहरु :
सरकार संग किन जाेरि खाेज्दैछन् भिम उपाध्याय ?
प्रमलाई अपारदर्शी, गुपचुप कार्य गर्नमा लगाम लगाउनुपर्छ – उपाध्याय
सुयोग्य गुरु विना योग असम्भव छ – उपाध्याय
नेताको उपचारमा राज्यबाट भएको खर्च फिर्ता हुनु पर्छ – भिम उपाध्याय
भिम उपाध्यायको एउटा पोष्ट, १८ घण्टामा नै बोल्यो स्थानीय तह
फेक आईडी बनेपछि भिम उपाध्यायको साईबर ब्युरोमा उजुरी
सुयाेग्य गुरु विना याेग असम्भव छ – उपाध्याय
गाली पनि स्वादिलो मान्दै खाए, भिम उपाध्यायले (फेक आईडि काण्ड)